Wararka - Ku kaydi alaab badan meel bannaan oo yar oo leh AS/RS
Kaydinta alaabtu maaha inay macnaheedu tahay meel bannaan oo dhulka ah - culays yar AS/RS waxa loogu talagalay in lagu kaydiyo qaybo yar yar meel bannaan oo leh waxqabad ka dhaqso badan awowyaasheeda farsamada.Nidaamyadan AS/RS waxaa loogu talagalay inay wataan alwaaxyo adag oo fudud taasoo ka dhigaysa culeyska yar inuu ka jabo rakibaadda, ku shaqaynta, iyo dayactirka.Si gaar ah, iftiinka alloysyadani waxay u oggolaanayaan waxqabad degdeg ah, taasoo ka dhigaysa mashiinnadan si aad uga waxtar badan awoowayaashood farsamada.
Isticmaalka ugu badan ee fasalkan AS/RS waa kaydinta qaybaha yaryar iyo maaraynta soo qaadashada iyo dalbashada buuxinta.Badanaa lagu lammaaniyo isku-dhafan isku-dhafan oo ah haad-socod iyo maro-galooyin taagan ama khaanadaha, culayska-yar ayaa bixiya xalka ugu fiican ee kuwa SKU-yada ah ee u taagan heerka dhexe ee waxqabadka.
1. Degdeg ah oo sax ah
Wiish-load-yar-yar ayaa si degdeg ah oo sax ah u socda si uu u maareeyo wax-soo-saarka dalabka-mugga sarreeya ee soo qaadista ama soo-saarka.
2. Kor-sare, kaydinta cufnaanta sare
Xamuulka-yar AS/RS waxa uu adeegsadaa meel toosan oo ka badan hababka rafcaanka ee caadiga ah.Culaysyada waxaa lagu dhejiyaa khaanadaha leh saxnaanta sare si loo wanaajiyo cufnaanta kaydinta.
3. Waxqabad dabacsan, deggan
Wiishashka-load-yar-yar wuxuu isticmaalaa mastarada aluminium iyo taayirrada kaadimareenka si loo gaaro dhaqdhaqaaq deggan oo xasilloon, xitaa xawaare sare.Culaysyada yar yar ee AS/RS waxa lagu rakibi karaa meel kasta, oo ay ku jiraan xafiisyada ku xiga ama dabaqyada sare ee dhismayaasha.
4. Hagaajinta hufnaanta shaqada
Wiishka xawaarihiisa sare leh ayaa si toos ah u kaydiya oo u soo celiya culaysyada si degdeg ah oo sax ah, isaga oo si toos ah ugu gudbinaya hawl-wadeenada si ay u soo qaadaan.Tani waxay meesha ka saaraysaa wakhtiga lagu raadinayo iyo soo celinta alaabta.Culays-yar AS/RS ayaa sidoo kale ku fiican isku-dabaynta walxaha ka hor kala-soocidda, hagaajinta waxtarka hababka maaraynta dambe.
5. Isticmaalka tamarta oo yaraada
Qaabkii u dambeeyay ee Culayska Culayska yar yar ayaa 15% ka miisaan yar qaabkii hore.Matoorka ayaa sidoo kale laga dhigay mid yar, taasoo hoos u dhigtay isticmaalka korontada.
AS/RS Mini Load waxa lagu heli karaa xawaare badan oo toosan iyo mid toosan si loo waafajiyo shuruudahaaga.Intaa waxaa dheer, heerarka dardargelinta isbeddelka ah waxay xaqiijinayaan xasilloonida culeyska.Inkastoo AS/RS xawlihiisu sarreeyo, mashiinku si cajiib ah ayuu u aamusan yahay, isagoo ku shaqaynaya heerarka dhawaaqa xafiiska caadiga ah.
Waxtarka dayactirka, AS/RS Mini Load's drives iyo qaybaha si taxadar leh ayaa loo meeleeyay si sahlan loo heli karo iyo dayactir degdeg ah taasoo ka dhigaysa rakibaadda mid fudud oo degdeg ah.
Eeg sababta Mini Load AS/RS kuugu habboon tahay.